Global Voices teny Malagasy » Andron’ny Vehivavy Maneran-tany: Daty Iray, Zava-mitranga An-davitrisany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Marsa 2015 4:00 GMT 1	 · Mpanoratra Danica Radisic Nandika Tantely
Sokajy: Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Andron'ny Vehivavy Maneran-tany any Egypt tamin'ny alalan'ny Al Jazeera Anglisy sy Wikimedia. Creative commons.
Ho an'ireo erantàny mpampiasa Aterineto, mety miantomboka amin'ny fitsidihana ny “doodle” tsy fampiasàna saina isan'andron'ny Google  ny 8 Martsa, mirona manokana amin'ny iray amin'ireo fankalazàna fantatra indrindra erantany amin'ny zo amin'ny maha olom-pirenena, ny Andron'ny Erantany ho an'ny Vehivavy .
Na dia ireo vondrona mpiaro ny ara-tsosialy aza no voalohany nanely ilay fety maneran-tany, ary miompana bebe kokoa amin'ireo vehivavy miasa, samy manana ny endriny any amin'ny tany samihafa manerana ny tany ilay andro ankehitriny, manary ny tena fotokevitra niandohàny ary manindry kokoa ireo olana manokana izay atrehan'ireo vehivavy any amin'ireo fiarahamonina samihafa sy miovaova be misy azy ireo.
Any Eorôpa atsinanana, fifangaroan'ny Fetin'ny Reny sy Fetin'ireo Vehivavy ny 8 Martsa. Taloha, andro anomanan'ny lehilahy fanomezana kely ho an'ireo vehivavy manan-danja indrindra eo amin'ny fiainany io, ao anatin'izany ireo reniny, ireo vadiny, ary ireo vehivavy mpiara miasa aminy.
Tato anatin'ny taona vitsy anefa, nanomboka naka io andro io ho azy ireo manokana ny vehivavy, hikarakaràny hetsika mba hanairana ny saina sy hampiroboroboana ireo anjara toeran'ireo vehivavy amin'ny sehatry ny asa. Mazava ho azy, azon'ny fikarokarohana ny 8 Martsa 2015 ao amin'ny Google io fomba fijery io, mampiseho fa any amin'ireo firenena maro erantany, lasa andro fankasitrahana ireo anjara asan'ireo vehivavy eny amin'ny fiainam-bahoaka sy fiainana manokana io andro io.
Fandravàna ireo sàkana farany
Ireo hetsika sasany nokarakaraina ho an'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy manerana izao tontolo izao dia nahavita nanaitra ny saina momba ny zavatra atrehan'ireo vehivavy amin'ny fiarahamonina maoderina, na dia lazaina fa tsy mitady izany aza. Namandrika toerana iray ny antoko Liberal National Party (LNP)  (LNP) ao Aostralia tao amin'ny toerana misy ny CDB, hankalazàna ilay andro “mifanaraka amin'ny fisiana, ny vidiny ary ny fahafahannytsirairay”, araka ilay antoko.
Araka ny fantatra, toerana malaza natokana ho an'ireo lehilahy irery ihany any Brisbane ilay toerana nosafidian'ilay antoko. nanokana fotoana niresahana ilay raharaha ny Parlemantera Aostraliana ary nihomehy tamin'izany, raha vao nahita ny eso kely nahazo tamin'ny fisafidianana io toerana io.
Ny lehiben'ny LNP, izay ahitàna vehivavy mihoatra ny 6.000 isa amin'ireo 14.000 mpikambana ao, no Praiminisitra Aostraliana ankehitriny sady Minisitra federalin'ny vehivavy, Tony Abbott .
Nanararaotra ilay zava-nisy i Abbot mba hilazàna fa fandresena lehibe iray hafa ho an'ireo vehivavy ilay hetsika. Satria miomana ny hiresaka ny anjara toeran'ireo vehivavy amin'ny resaka politika amin'ny ambaratonga rehetra any Aostralia ireo mpikambana ao amin'ny antoko, hoy izy, misy làlana tsara hanombohana izany noho ny fandravàna ireo sakana farany, toy ny zavatra natokana ho an'ireo lehilahy irery ihany, izay mitsangana eo anoloany ve?
Tsy araka ny mahavehivavy azy matetika ny anton'ireo olan'ireo vehivavy
Any amin'ireo toerana hafa indray anefa, ireo ady ho amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy no iray isan'ny tena mahamay momba ireo zo fototra. Ireo fikambanana toy ny “International Media Support” (IMS) dia miasa mba hijerena manokana ireo vehivavy, izay indrisy, fa atao ho faharoa laharana ny mahavehivavy azy noho ny mari-pamantarana izay tsy fiarahamoniny irery ihany fa koa ny fiarahamonina iraisam-pirenena manontolo mihitsy no nametaka izany amin'izy ireo.
Ao amin'ny sary iray  ao amin'ireo vohikalany, manasongadina ireo tovovavy Kiorda tsotra nefa miavaka, miisa dimy avy any Syria ny IMS, izy ireo izay te-hampiseho fa “tsy afaka hanombohana ny fampahafantarana ireo mombamomba azy ny teny hoe mpitsoa-ponenana” ary tian'izy ireo hijerena azy “ho toy ny vehivavy aloha”. Tamin'ny fitanisàna vitsivitsy sy sary am-polony teo, tsy nanova fotsiny ihany ny fomba fijerin'ny ankamaroan'ny olona ireo mpitsoa-ponenana ilay sary, fa ihany koa ny fijery ny anjara asan'ireo vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina Syriana.
Mitovy amin'izay, ilay bitsika malaza indrindra  mikasika ny zon'ny olom-pirenena nalefan'ny Human Rights Watch, ho an'ny herinandron'ny 2 Martsa, nifandray amin'ny lahatsoratry ny Reuter  momba ny vondrona lehilahy Afghan izay nanao diabe tao Kaboul, renivohitry ny firenena, mba hisintona ny fijery ho amin'ireo olan'ireo vehivavy, niakanjo “burqa” miloko manga antitra hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladiha.
— Andrew Stroehlein (@astroehlein) March 6, 2015 
Lehilahy Afghan nanao burqas ary nandeha tongotra taoKabul ho an'ny zon'ireo vehivavy
Iray amin'ireo mpikatroka mafana fo, lehilahy tanora iray 29 taona, nilaza izao: “Hankalaza ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy any amin'ireo hotely lehibe ireo manampahefantsika, fa isika kosa te-hanao izany eny an-dàlana.”
Nahazo fanehoankevitra samihafa avy tamin'ireo mpandalo ilay hetsika kely kanefa manan-danja . Ireo vehivavy sasany naneho hevitra hoe tsy mila lehilahy hisolo toerana azy izy ireo, nisy vehivavy tanora zokiny iray nilaza fa safidy no itafiany burqa na dia nanandrana ny nanakana azy tsy hitondra izany intsony aza ireo zanany sy ny vadiny, raha nisy ireo hafa nankasitraka sy nanohana ilay vondron-dehilahy kely mpikatroka mafana fo.
Na manaiky na tsia io zavatra lazaina io ny tsirairay, efa ohatra iray lehibe amin'ny hoe tena misarika any amin'ny fiovàna andalovan'ireo fiarahamonina samihafa ny fampahafantarana ireo zon'ireo vehivavy, sy hoe tsy hetsiky ny vehivavy samirery ny finiavana hiaro ny mahavehivavy. Afaka hita ao amin'ny Facebook ny lahatsarin'ilay fandehanana an-tongotra , amin'ny alalan'ny AJ+.
Vehivavy miray hina manohitra ny fifandirana politika
Tsy famenoana ny elanelana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy ihany akory ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy, fa famenoana ny tsy fahampiana eo amin'ny resaka kolontsaina sy politika ihany koa, matetika amin'ny alalan'ny fanehoana firaisankina eo amin'ireo samy vehivavy.
Fanehoana firaisankina iray natanjaka izao no nataon'ireo vehivavy miisa 1500 , tamin'ny sisiny roa tao amin'ny toerana fisavàna tao Kalandia , ny toerana fisavàna manelanelana an'i Cisjordanie sy Jerosalema Avaratra, ny tolakandron'ny 7 Martsa 2015.
Nanatevina ilay laharana ireo vehivavy Israeliana avy amin'ny razambe Jiosy sy Palestiniana ary ireo vehivavy avy any Cisjordanie mba hanehoana ny firaisankinan'ny Israeliana-Palestiniana amin'ny fanoherana ny fibodoana sy fifandirana eo amin'ny faritra. Nitazona takelaka mivaky toy izao ireo vehivavy ‘Eny ho an'ny fitoviana, tsia ho an'ny fanavakavahana’ ary notsenain'ireo Israeliana mpitandro filaminana tamin'ny entona mandatsa-dranomaso, grenady mankarenin-tsofina, ary fitsifotra misy dipoavatra, izay niezaka ny hanaparitaka ireo vahoaka maro. Mpanao fihetsiketsehana miisa am-polony no naratra, ary 10 nahazo fitsaboana ara-pahasalamana.
Tamin'ny seho iray hafa momba ny firaisankina ara-politika, ny Federasiôna Erantanin'ny Fikambanana'ireo Vehivavy Okrainiana, dia niantso ireo vehivavy any Okraina  mba hanjohy an'i Nadiya Savchenko, vehivavy Okrainiana mpanamory amin'ny tafika an-habakabaka, izay notazonin'ireo manampahefàna Rosiana any am-ponja  nanomboka ny volana Jona 2014, andro iray monja amin'ireo 12 herinandro izay itokonany tsy mihinan-kanina amin'izao.
Ny Kaomiseran'ny Firenena Mikambana Momba ny Zon'Olombelona, governemanta maro, ary fikambanana maro momba ny zon'olombelona dia samy niantso ny hamotsorana avy hatrany an'i Savchenko, fa ny 8 Martsa 2015, samy nitambatra mba hanavotana ny aina sy ny fahafahan'ny vehivavy iray ireo vehivavy sy lehilahy manerana ny tany.
— John Semenowicz (@JohnSemenowicz) March 8, 2015 
@BBCGuernsey Fomba iray tsara indrindra hankalazàna ny andro erantany ho an'ireo vehivavy ny fanavotana ny ain'ny iray amin'izy ireo
Hetsika tena maneran-tany
Ao anatin'ireo ‘Andro marobe Ankalazaina Erantany’ neken'ny Firenena Mikambana, ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy no azo antoka fa tena be mpiresaka indrindra. Na eo aza ireo olana maro samihafa atrehan'ireo vehivavy any amin'ny firenena sy faritra samihafa, hita tena nankalazaina marina tokoa ilay andro, amin'ny fomba hafa samy nanana ny azy, saika tany amin'ny firenena rehetra erantany.
Tena andro lehibe eran-tany tokoa io, ary samy tsy misy maniry ny ho atao anjorom-bala amin'ireo hetsika ireo fikambanana maneran-tany ary ireo orinasa manana rantsana amin'ny firenena maro hafa.
Nanao fanambaràna an-dahatsary ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana, Ban Ki-moon , mba hanamarihana ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy sy ny faha 20 taonan'ilay Fihaonana Erantany faha 4 momba ny Vehivavy natao tany Beijing, izay nantsoin'i Ban hoe “tondrozotra ho an'ny zon'ny vehivavy”. Satria ilay firenena nampiantrano io fihaonana io, i Shina, dia nitàna am-ponja  vehivavy mpikatroka mafana fo miady amin'ny sotasota ara-nofo any anaty fitateram-bahoaka, niteny i Ban mba hampahatsiahy amin'izao tontolo izao fa “zon'olombelona ny zon'ny vehivavy”.
Tsy nitsahatra ny nanamarika ilay andro tamin'ny “doodle” iray tsy fahita firy ny Google. Nampiasain-dry zareo ny YouTube, ilay sehatra fizaràny lahatsary, mba handefasana fanentanana ety anaty aterineto izay mikendry ny “hanome aingam-panahy sy hankahery ireo tovovavy rehetra erantany”.
Miantso ireo vehivavy rehetra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ilay fanentanana YouTube , mba handefa torohevitra kely ho an'ireo ankizivavy— iray izay tian'izy ireo ho azo avy amin'ny ankizivavy rahateo— amin'ny fampiasàna ny tenifototra #DearMe. Vehivavy an'arivony no toa nanjohy ilay hetsika ary lasa nalaza be ilay tenifototra, na tamin'ny Twitter, na tamin'ny Facebook . Mitovy amin'io ihany fa misaraka, #DearMe: Avy amin'ireo tovolahy ‘ dia hita misy manao ihany koa, manamarina hatrany indray fa mikasika ny rehetra ny resaka momba ny fitoviana sy ny fankaherezana.
Wikimedia, ilay tetikasa fampianarana tsy andoavam-bola ary tsy itadiavana tombony, dia nampiseho vehivavy miavaka mitondra anjara biriky ao amin'ny Wikipedia , ary ireo fomba maro ampiasàn'izy ireo ny Wikipedia mba hampisy fahasamihafàna eo amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Ny fahasamihafàna eo amin'ireo vehivavy miisa 11 nasongadina, avy aminà zom-pirenena, fiaviana, taona, ary asa samihafa daholo, dia manambara bebe kokoa momba ny fikarakaràna sy ireo kolontsaina samihafa mivelatra be izay resahan'ireo tetikasa misokatra tahaka azy ity.
Facebook, tambajotra sosialy izay vehivavy no maro mpampiasa azy , dia nanao fanentanana ho an'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy, tsotra nefa tena nandaitra. Ny sary fanentanan'ilay tranonkala dia niompana tamin'ny fametrahana vehivavy 12 tena niavaka  izay manana toe-tsaina fandraharahàna, famoronana, ary fanaovana tena zavatra miavaka fa iraisan'ny rehetra.
Farany, ny Twitter dia namorona lahatsoratra am-bilaogy  manokana hisarihana ny saina ho amin'ireo mpampiasa Twitter sasany miavaka, izay mampiasa ilay tambajotra sosialy mba hiresahana isan'andro ireo zon'ireo vehivavy. Miantomboka amin'ny fampahatsiahivana ny herin'ireo fitaovana azo ampiasaina ankehitriny mba hanambàrana ny olona ho ao an-damosin'ireo zava-dehibe arovana ilay lahatsoratra, fa tsy hoe amin'ny ‘Andro Erantany’ fotsiny, fa mandritra ny taona mihitsy:
Nitombo 300% tato anatin'ny telo taona ny resaka manodidina ny “fiarovana ny vehivavy”. Tao amin'ny Twitter ireo resadresaka marosy fanentanana matanjaka no nanomboka, ary nahasarika sain'olona an-tapitrisa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/31/68277/
 ny “doodle” tsy fampiasàna saina isan'andron'ny Google: http://www.google.com/doodles/international-womens-day-2015
 Andron'ny Erantany ho an'ny Vehivavy : http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Day
 Namandrika toerana iray ny antoko Liberal National Party (LNP): http://www.theage.com.au/queensland/lnp-hosts-international-womens-day-lunch-at-menonly-club-20150304-13ux5s.html
 Tony Abbott: http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Abbott
 sary iray: http://www.mediasupport.org/women-first-refugees-second/
 bitsika malaza indrindra: http://www.hrw.org/most-popular-on-twitter
 lahatsoratry ny Reuter: http://in.reuters.com/article/2015/03/05/afghaninstan-women-burqa-idINKBN0M11CY20150305
 March 6, 2015: https://twitter.com/astroehlein/status/573734416352157696
 hetsika kely kanefa manan-danja: https://globalvoicesonline.org/2015/03/08/is-afghanistan-getting-closer-to-a-reckoning-with-gender-violence-and-discrimination/
 ny lahatsarin'ilay fandehanana an-tongotra: https://www.facebook.com/video.php?v=527482094059969
 Fanehoana firaisankina iray natanjaka izao no nataon'ireo vehivavy miisa 1500: http://972mag.com/jewish-arab-women-protest-on-both-sides-of-israeli-checkpoint/103865/
 toerana fisavàna tao Kalandia: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalandia#Kalandia_checkpoint
 niantso ireo vehivavy any Okraina: http://www.ucc.ca/2015/03/02/world-federation-of-ukrainian-women-organizations-call-to-action-solidarity-with-nadiya-savchenko-hunger-strike/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+UkrainianCanadianCongress+%28Ukrainian+Canadian+Congress%29
 izay notazonin'ireo manampahefàna Rosiana any am-ponja: https://globalvoicesonline.org/2015/02/09/freesavchenko-ukranian-pilots-hunger-strike-in-russian-prison-hits-ninth-week/
 March 8, 2015: https://twitter.com/JohnSemenowicz/status/574570625228013569
 nitàna am-ponja: https://globalvoicesonline.org/2015/03/07/china-harassment-international-womens-day-activists/
 fanentanana YouTube: https://www.youtube.com/user/YouTube?feature=inp-gh-ydr-us
 Twitter, na : https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23dearme&src=typd
 #DearMe: Avy amin'ireo tovolahy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpi6ZahtOH5XwoNcaE7vobQob6EcffEF
 vehivavy miavaka mitondra anjara biriky ao amin'ny Wikipedia: https://blog.wikimedia.org/2015/03/06/meet-some-women-who-contribute-to-wikipedia/
 izay vehivavy no maro mpampiasa azy: http://www.entrepreneur.com/article/231970
 vehivavy 12 tena niavaka: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905211789517733.1073741829.390332947672289&type=1
 lahatsoratra am-bilaogy: https://blog.twitter.com/2015/commemorating-international-women-s-day-on-twitter